यो कम्पनि हेर्नुस जसले ६ महिनामा ३८ अर्ब धेरै फाईदा गर्यो तपाईले भर्नु भयको आईओपी मा त परेन ? – Khabarbot
यो कम्पनि हेर्नुस जसले ६ महिनामा ३८ अर्ब धेरै फाईदा गर्यो तपाईले भर्नु भयको आईओपी मा त परेन ?
काठमाडौं : नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको नाफामा सामान्य सुधार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ०.२६% ले खुद नाफा बढाएर २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा नेसनलले २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यसअवधिमा कम्पनीले खुद बिमा शुल्क भने ४१% ले बढोत्तरी गरेर ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
गत वर्ष यसले ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यसको जीवन कोषको आकार पनि बढेको छ । गत वर्ष ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको यसको जीवन बिमा कोषमा अहिले बढेर ३८ अर्ब भएको छ । नेसनल लाइफको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८ करोड २६ लाख २६ हजार रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ ।
पुस अन्त्यसम्म आइपुग्दा यस कम्पनीले कुल १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम ४० करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल यसको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ३४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४९ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।
अभियन्ता भनिनेहरुको उद्वारको नाममा यस्तो दादागिरी ,बृद्ध आमालाई यसरी घिसारियो